Fanodinana ireo faritra voafaritra tsara - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek Machining dia manome serivisy OEM / ODM, afaka manome fahaiza-manao amin'ireo mpitarika indostrialy eny an-tsena izahay. Ny serivisinay fikosoham-bary dia ahitana milina fanodinana CNC marobe, ary ny vokatray dia matetika ampiasaina amin'ny milina, elektronika, mandeha ho azy, fiara, fitsaboana, angovo vaovao ary sehatra hafa.
Inona ny fizotry ny fanodinana fanaraha-maso isa?
Ny fikosoham-baravarankely dia mampiasa fitaovana fanapahana rotary mitovy amin'ny fandavahana, afa-tsy ny fitaovana iray mihetsika manaraka ny famaky hafa mba hamoronana endrika isan-karazany, ao anatin'izany ny lavaka sy ny slot. Izy io dia endrika mahazatra amin'ny milina CNC satria manatanteraka ny fitrandrahana sy ny lathing. Ity no fomba mora indrindra handavahana lavaka ho an'ny karazana fitaovana premium rehetra hamokarana vokatra mety amin'ny orinasanao.
Fitotoana famolavolana ary rafitra rafitra CNC mahomby
Miaraka amin'ny famatsiana coolant spindle, afaka manapaka fitaovana haingana kokoa noho ny rafitra spray spray mahazatra isika, ary ny CAD / CAM, UG ary Pro / e, 3D Max. afaka mifanerasera am-pahombiazana kokoa amin'ny mpanjifa ara-teknika ary manafaingana be ny fizotrany manontolo ary manome anao vokatra mahomby be. Ireo ivon-toeram-pamolavolana CNC marindrano roa dia misy knuckles familiana mandeha ho azy ahafahantsika milina amin'ny zoro rehetra. Miaraka amin'ny fampiasana fitaovana boribory, io dia ahafahantsika mahatratra ny géérique sarotra mitovy amin'ny masinina axis dimy.
5-AXIS CNC milina fahaizany
Rehefa voatonona ny milina 5-axis mahazatra, dia manondro ny isan'ny torolàlana ahafahan'ny fitaovana manapaka, fa aorian'ny fametrahana ny fitaovana fanapahana dia mihetsika manerana ny famaky X, Y ary Z ary mihodina eo amin'ny famaky A sy B, miaraka. fikosoham-bary sy milina ary miaraka amina milina avo lenta avo lenta. Io dia ahafahan'ny faritra na ampahany be pitsiny sy be pitsiny misy sisiny maro azo zahana hatramin'ny sisiny dimy amin'ny ampahany amin'ny fananganana tokana. Izany dia manohana ireo injenieran'ny famolavolana hamolavola ireo faritra marobe izay afaka manatsara ny fiasa sy ny fahombiazan'ny vokatra farany nefa tsy misy fetrany voafetra.
Tombontsoa amin'ny famolahana 5-Axis CNC
Famaranana avo lenta avo lenta: Azo atao ny mamokatra ampahany vita amin'ny milina avo lenta miaraka amin'ny fampiasana cutter fohy kokoa miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa, izay afaka mampihena ny hovitrovitra izay mitranga matetika rehefa manamboatra lavaka lalina miaraka amina fizarana 3-axis. Mahatonga famaranana ambonin-javatra vita vita milina izy io.
Fahamarinana fametraham-pahefana: ny famolavolana sy ny milina miaraka amin'ny milina 5-axis dia nanjary zava-dehibe raha toa ka tsy maintsy manaraka ny kalitao hentitra sy ny fampahafantarana azy ny vokatrao. Ny machining CNC 5-axis koa dia manafoana ny filàna ny famindrana ny sangan'asa amin'ireo toeram-piasana marobe, amin'izay hampihenana ny mety ho lesoka.
Fotoana fohy: Ny fahaizan'ny milina 5 axis dia mihena ny fotoana famokarana, izay mandika fotoana fohy kokoa ho an'ny famokarana raha oharina amin'ny milina 3-axis.
Metaly: Aluminium, vy vy, varahina, vy, varahina, titanium, volafotsy Sterling, alimo, sns.
Plastika mafy sy fitaovana hafa: Nylon, Acetal, Polycarbonate, Polystyrene, Acrylic, Fiberglass, fibre Carbon, Teflon, ABS, PEEK, PVC, sns.